१२ सय गोही नदीमा छोडियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
१२ सय गोही नदीमा छोडियो
शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८ मा प्रकाशित !
२० फागुन​, चितवन। घडियाल गोहीको सङ्ख्या बढाउनका लागि एक हजार २२६ वटा गोही विभिन्न नदीमा छाडिएको छ । नदी छेउमा सङ्कलन गरिएको अन्डा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको कसरामा रहेको गोही प्रजनन केन्द्रमामा ल्याई बच्चा कोरलेर हुर्काएपछि नदीमा छाडिँदै आएको छ ।
सन १९७८ मा स्थापना गरिएको सो प्रजनन केन्द्रमा गोहीका बच्चा हुर्काएर सन १९८१ बाट नदीमा छोड्न थालिएको हो । केन्द्र हेर्दै आएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत वेदबहादुर खड्काका अनुसार हालसम्म राप्तीमा ५४६, नारायणीमा ३९९, कालीगण्डकीमा ३५, सप्तकोसीमा ९५, कर्णालीमा ४१ र बबहीमा ११० वटा गोही छोडिसकिएको छ ।
अन्य नदीमा गोहीको संरक्षण कम हुन थालेपछि पछिल्लो समय भने राप्ती नदीमा मात्रै गोही छोड्न थालिएको हो । खड्काका अनुसार गतवर्षको माघ र यस वर्षको माघमा राप्ती नदीमा मात्रै १७० वटा गोही छाडिएको छ । यस वर्ष चार भालेसहित ७० वटा गोही छाडिएको खड्काले बताए ।
ठूलो सङ्ख्यामा गोही छाडेको भए पनि राप्ती र नारायणीबाहेक अन्य नदीमा भने न्यून मात्रै गोही रहेका छन । खड्काका अनुसार राप्ती र नारायणीमा १५० को हाराहारीमा गोही भएको अनुमान छ । अन्य नदीमा भने ५० को हाराहारीमा गोही भएको अनुमान केन्द्रको छ । प्रजनन केन्द्रमा हाल १३ माउसहित ६०० जति गोही रहेको उनले जानकारी दिए ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा बगेको नदीको स्थलमात्र गोहीको वासस्थानका लागि सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले नेपालका वासस्थान प्रदूषित हुँदै जानु र पानीको बहावसँगै भारततर्फ गोही जानुले दिनानुदिन यसको सङ्ख्या घट्दै गएको हो ।
भारतीय संरक्षणकर्मीले खिचेका गोहीका अधिकांश तस्बिर नेपालमा छाडिएका गोहीको हुने गरेको दावी उनको छ । खड्काले एउटा गोहीको अन्डाबाट बच्चा कोरलेपछि एक हप्तामा आमालाई छोड्ने गर्दछ । त्यसका लागि खेल्न करिब २०० किलोमिटर नदीको लामो भूभाग चाहिने भए पनि नेपालका नदीमा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा भारततर्फ जाने गरेका छन । जान सजिलै जाने तर फर्किंदा नदीमा भएका तटबन्ध र पानीको बहावका कारण कठिन हुने हुँदा बर्सेनि नेपालमा हुर्काएर छाडिएका गोही भारततर्फ जाने गरेको उनले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले गोहीको वासस्थान मानवका कारण असुरक्षित बन्दै गएकाले संरक्षण गर्न अप्ठ्यारो भएको र यसको सङ्ख्या बढाउन नसकेको बताए। उनले माछा मार्ने, गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकाल्नेलगायतका कारण गोहीको वासस्थान असुरक्षित बन्दै गएको बताए ।
एसियामा नेपाल र भारतमा प्रजनन केन्द्र खडा गरी घडियाल गोही संरक्षण गर्दै आएका कारण लोप हुनबाट बचेका छन । तर अन्य देशमा घडियाल गोही लोप भइसकेका छन ।
सन २००७ मा गोहीलाई सङ्कटापन्न जलचरका रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ । खड्काले सामान्यतया सङ्कटापन्न घोषणा गरेको १० वर्षमा ५० प्रतिशत लोप भइसक्छ । त्यसैले पनि यसको सङ्ख्या बढाउन नेपालमा सबैतिरबाट सहयोगको खाँचो रहेको छ उनले भने।
PREVIOUS POST Previous post: फोन रेकर्ड हेर्न अदालतको आदेश चाहिने
NEXT POST Next post: ट्रेक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, फाल्गुन २०, २०७३ ०९:३८